सरकारले अब कृषि अनुदान नदिने ! — Ujyaalo Lalteen
गृहपृष्ठ » अार्थिक → सरकारले अब कृषि अनुदान नदिने !
सरकारले अब कृषि अनुदान नदिने !
April 5, 2016१९१ पटक
काठमाडौं । कृषि प्रधान देशको रुपमा चिनिइएका यहाँका किसानहरुले अव भने कृषि अनुदान नपाउने भएका छन । कृषि विकास मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षबाट कृषि क्षेत्रमा अनुदान नदिने भएको हो । कृषि क्षेत्रको विकास गर्न भन्दै बर्षैपिच्छे अर्बौं रुपैयाँ खर्च गरे पनि सोचेजति प्रगति नआएपछि अनुदान व्यवस्था हटाइएको बताइएको छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता योगेन्द्र काकीका अनुसार बर्षैपिच्छे ७ देखि ८ अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिँदै आएको छ । तर, अनुदान अनुसारको प्रगति नआएपछि यस्तो व्यवस्था हटाइएको हो । उनका अनुसार मन्त्रालय बाहेक कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने अन्य परियोजनाले पनि अनुदान रकम वेबसाइटमा राख्नुपर्ने व्यवस्था ल्याउन लागेको हो ।
राजनीतिक पहूँचका आधारमा अनुदान लिने र त्यो रकम अन्यत्र खर्च गर्ने पाइएपछि मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षबाट अनुदान कार्यक्रम नै नराखेको बताएको छ । कृषि मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा पनि १३ अर्ब रुपैयाँ अनुदान शिर्षकमा बजेट विनियोजन गरेको छ ।
त्यसमध्ये ५ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँको रासायनिक मल खरिद गरेको छ । बाँकी रकम कुन ठाउँमा कसरी प्रयोग भएको जानकारी समेत नहुने मन्त्रालयले बताएको छ । मन्त्रालयका सह–सचिव समेत रहेका प्रवक्ता कार्कीले प्रगति गरेका कृषि आयोजना सहुलियत प्रदान गर्ने जानकारी दिए ।
त्यसैगरी, मन्त्रालयले आगामी बर्ष धान, मकै, गहुँ र माछा उत्पादनलाई बढावा दिनेगरी कार्यक्रम बनाउन लागेको छ । त्यसैगरी, अदुवा, बेसार र अलैँची उत्पादन वृद्धि गर्न विशेष किसिमको कार्यक्रम ल्याउने कार्कीले बताए ।